03 May 2013-Fante Online
Friday Sermon: God Consciousness and Unity of Allah - 03rd May 2013 - Fante Translation.
Fida Nyamesɛmka: Esusuowketseaba 3, 2013.
(Friday sermon – 3rd May, 2013 – Fante Translation)
NYANKOPƆN HO NHUNII NA KORTSEE A ALLAH YƐ.
O! Hom nkorͻfo a hom agye edzi! Hom nsuro Allah na ͻkra biara nhwɛ dza ͻdze ridzi n’enyim ama akyerɛ no kwan. Na hom nsuro Allah; Ampaara dɛ Allah nyim dza hom yɛ nyinara yie.
Na mma hom nnyɛ dɛ nkorͻfo no a hͻn werɛ fiir Allah no, ntsi Ɔmaa hͻn werɛ fiir hͻn ankasa hͻn ho. Wonyinom nye etuatsewfo no (59:19-20).
Nyankopͻn ayɛ Taqwa (tseneneeyɛ) gyedzinyi ne gyinabew tsitsir. Kuran Krͻnkrͻn mu nsɛmpͻw pii ma mbransɛm dodowara dze suo iyi mu anaadɛ osi no gyina. Kuran afrɛ hͻn a wodzi dɛm mbransɛm yi ekyir dɛ Muttaqi (tseneneefo) na abͻ hͻn a wͻmmfa nnkͻ ndzeyɛɛ mu no kͻkͻ wͻhͻn ewie ho.
Ebɛnadze nye Taqwa? N’ase tseabaa dɛ mbrɛ Kuran Krͻnkrͻn akyerɛ nye dɛ ebɛma Nyankopͻn ho enyigye edzi adͻntsen wͻ biribiara do na ehu Nyankopͻn dɛ Ɔyɛ Kor na biribiara nnyi hͻ a wͻdze to No ho na Ɔno nye tum nyinara ne farbaa. Taqwa nye ibedzi dza Nyankopͻn pɛ nyinara do na sɛ epɛ dɛ inya N’enyigye no so a, eyɛ N’abͻdze hͻn apɛdze.
Anohoba Messiah (ANN) no kyerɛɛw dɛ:
Ɔda edzi dɛ,dɛ mbrɛ w’adwen bͻkͻ Otumfo Nyankopͻn Ne nhyehyɛɛ do no, edzi ho nhyehyɛɛ nyinara do no, na edze nyimpadua ne mfafakuwa na nsatseaba, ndzɛmba ebien ebien tse dɛ enyiwa na asowa, nsa na nan na dza ͻkeka ho a yehu na wͻdze dzi dwuma; na ndzɛmba bi so a wͻwͻ nsumaamu tse dɛ hɛn adwen na dza ͻma yɛda hɛn su edzi; iyinom wͻ dɛ yɛdze dzi dwuma wͻ ne mber pa mu anaaso yɛ sanka hͻn dwumadzi wͻ ber a ͻnnyɛ mu; na wͻbͻ hɛn kͻkͻ wͻ ndzebͻn a ͻnnda edzi papa ho; na yɛdwen hɛn fɛfo hͻn eyiedzi ho; iyi nye kwan a yɛbɛma hɛn sunsum mu ahoͻfɛw edzi mu [Brahin-e-Ahmadiyya, Part V, Ruhani Khaza’in, vol. 21, pp. 209. Essence of Islam Vol. II p.348).
Dɛm gyinabew yi na Anohoba Messiah (ANN) kyerɛɛ mu pefee kyerɛɛ hɛn na iyi so na n’enyi da dɛ yɛbɛyɛ. Fida kakra a etwa mu kͻ no Hadhrat Khalifatul Masih twee hɛn adwen gyinaa dɛ Jama’at dzibewdzifo beedzi hɛn nhyehyɛɛ na mbra a ͻfa no gyedzi ho do. Ndɛ so asɛmpͻw yi gyee nkyerɛkyerɛmu bio. Ahmadiyyafo hͻn tsir ayɛ yie dɛ hͻn a wͻgye dzi wͻ mber yi mu no, hͻn na wͻatwe hͻn adwen egyina Nyankopͻn ho yie. Ɔyɛ Anohoba Messiah (ANN) n’enyimpa dɛ wakͻdo akyerɛ hɛn anamͻn kwan no a wͻnam do nya gyinabew a ͻkrͻn no a ͻtwe nyimpa kͻ Nyankopͻn nkyɛn no. Nokwar kotoo dɛ ankorankor biara na mpɛnpɛndo a ͻwͻ wͻ ahotsewee mu, mbrɛ osi to adze dzin na tsir mu adzehu mu.
Dɛm ntsi nna wͻahyɛ dɛ obiara wͻ dɛ ͻbͻ mbͻdzen biara a obotum na ͻpon anohoba a ͻ’abͻ ama Nyankopͻn no. Sɛ gyedzinyi bͻ mbͻdzen wͻ iyi ho a, ͻno nna odzi Taqwa nhyehyɛɛ do. Wͻahyɛ no pɛpɛɛpɛ dɛ edze wo nsa, w’anan, w’asowa na w’enyiwa bedzi dwwumapa, na ͻyɛnhyɛ dɛ nnkɛyɛdza wͻabra. Nhyɛ dɛ yɛdze nsatseaba na hɛn mfɛfɛkuwa bedzi dwuma aboa nkorͻfo hͻn eyiedzi nko. Pii wͻ hͻ a wͻnnye mfɛfɛkuwa binom nnyi nkitahodzi biara na iyinom nnyɛ mfaso anaa ͻnnhaw nyimpa biara. Sɛ dɛm asɛm yɛbͻ ho mpɛpɛw a yehu dɛ nyimpa biara noara na odua ndzeyɛɛ bi do dze yieyɛ anaa ͻhaw ba noara no do.
Hwɛ Nyankopͻn ama hͻn kwan dɛ wͻnyɛ anaa wonnyi no akwa. Sɛ eyɛ dza wͻabra wo no a, nyimpa fi mpɛnpɛndo no a Nyankopͻn ahyehyɛ ato hͻ no na ͻtow fom ho. Sɛ annyɛ dza wͻahyɛ dɛ wͻnnyɛ a, nyimpa fi dza Nyankopͻn aka dɛ wͻnnyɛ no. Dɛm no, dɛ ereyɛ dza otsia Nyankopͻn Ne nhyehyɛ no anaa erennyɛ dza Nyankopͻn ahyehyɛ no, nyinara bu Nyankopͻn Ne mpɛnpɛndo no na ͻma ͻnye Taqwa ntamu twe. Dɛ mbrɛ ͻwo na Taqwa ntamu kwan rewar no dɛmara so na ehwe Abͻnsam n’anan do. Dɛm ntsi na Anohoba Messiah (ANN) no kaa dɛ, nnyɛ dɛ gyedzinyi beyi dza wͻabra no nko eso ͻwͻ dɛ aber biara ohu Abͻnsam no nsumaamu ntuhyɛdo no. Sɛ ihu no dɛm a ͻma itwitwa gye wo ho fi Abͻnsam ne nsumaamu ntuhyɛdo a ͻnam akwan soronko do yɛ no. Abɛɛfo mfir pii wͻ hͻ a ͻdze ͻhaw ba. Dɛ wͻdze bedzi dwuma ma eyiedzi aba no, ͻtͻfabi a wͻdze dzi dwuma wͻ akwan bi mu a ͻdze Satan no ntuhyɛdo ba. Wͻtwe binom fi Nyankopͻn No nsomee ho ma ͻdze ͻsɛe ba brapa mu. Nkorͻfo hwɛ no enyiwa do dɛ ͻyɛ asɛm a ͻfa no obi noara noho; ͻyɛ ebɛnadze dɛ sɛ obi bͻtow kyakya anaa ͻhwɛ anadwe sene (film) wͻ “internet” anaa TV do. Anaaso ndzeyɛɛ pii wͻ hͻ a nkorͻfo yɛ a onndzi mu. Wͻdwen dɛ obiara nnyi dɛ ͻyɛ biribiara wͻ ho osiandɛ onndzi obiara ewu pͻkyee. Mbom, ndzɛmba a wͻnye Nyankopͻn No kwan bͻ ebira no ͻtwe obi fi Nyankopͻn No som ho; wͻtwe obi fi Nyankopͻn N’apɛdze ho dɛmara so na ͻtwe obi fi dza oye dɛ ebɛyɛ ama nyimpa ho.
Nsa, kyakyatow, mfonyin bͻn a woyi no wͻ “internet” do, anyɛnkofa a onndzi mu wͻ dɛm aman yi mu yi ma awar pii gu. Wͻdze mbabun fa kwan bͻn do, mpo wͻtwe hͻn fi gyedzi a ͻkyerɛ dɛ Nyankopͻn wͻ hͻ ho, na iyi ma wͻyɛ asokyewfo wͻ dͻm mu. Nyankopͻn esi no p dɛ obiara ne nsatseaba no su na n’adwen wͻ dɛ ͻdze dzi dwuma dɛ mbrɛ Nyankopͻn ahyɛ wͻ ne mber do ma iyi ma nyimpa tu kafo wͻ Taqwa mu. Kuran mu nsɛm a yɛkenkan ahyɛse no ka dɛ enya agye edzi ewie no, ͻwͻ dɛ edze Taqwa yɛ wodze. Wiadze yi mu enyigyedze na afɛfɛdze nnyi dɛ ͻyɛ biribi wͻ w’enyi do. Ɔwͻ dɛ nyimpa hu dza ͻ’ayɛ dze rohwehwɛ Nyankopͻn enyigye osiandɛ iyinom na yebohu no wͻ wiadze kor no mu, na wiadze afɛfɛdze, ahotͻ na enyigyedze bɛka ha ara. Nyimpa wͻ dɛ oker noho; bͻn no ndwow wͻ Nyimpa a ͻnnhwɛ yie na no werɛ fir Nyankopͻn mu. Sɛ nyimpa pɛ nhyira a onnyi ewie a ͻmfa Nyankopͻn No kwan do.
Nsɛmpͻw ebien a yɛkenkaan ahyɛse no, ma odzi kan no ka Kuran mu nsɛm a wͻkenkan wͻ Nikah (awar) ase. Ɔtwe adwen gyina ͻbra a wͻbͻ ndaamba ͻnye awow ntoatoado do na ͻma ahotsewee krͻn osiandɛ mbofra ahotseweefo yɛ Nyankopͻn N’enyigye kwan. Mbofra ahotseweefo nndͻn hͻn ewie ngo nko, wͻkrͻn hͻn awofo hͻn gyinabew wͻ Ndakwamba ͻnam asͻr a wͻyɛ ma hͻn ntsi. Nyankopͻn ka no wͻ ha dɛ ͻwͻ dɛ yɛkaa ber a wͻregye awar no dɛ wiadze yi mu afɛfɛdze, ahotͻ na enyigye yɛ adze a ͻnnkyɛr. Awar na wiadze koryɛ yɛ adze a ͻnnkyɛr. Dza ͻyɛ enyigye a wotum nya no wiadze yi mu na n’aba no ma enyigye kor no mu. Nyankopͻn ka no mpɛn pii dɛ yɛngyina pintsinn wͻ Taqwa mu na yɛnyɛ ndzeyɛɛ a ͻbɛma wͻadͻn hɛn ngo wͻ wiadze yi mu ͻnye ndakwamba no so mu na yɛkaa dɛ Onyim biribiara. Hɛn ndzeyɛɛ, dɛ osuara o, dɛ no ho nnhia papa biara o, worubu ho nkontaa. Ohia papaapa dɛ yebotutu hɛn anamͻn wͻ ahwɛyie mu.
Anohoba Messiah (ANN) kaa no wͻ nhyiamu bi ase dɛ Islam abrabͻ gye owu naaso obi a ͻbɛgye Islam ato mu no nna ewie no onya nkwa. Hadith aka dɛ, binom hͻn adwen yɛ hͻn dɛ wiadze ahonya yɛ ahenman mu kansa ͻtse dɛ ogya amandzehu mpo a. Ahotseweefo gye ͻhaw to hͻn do wͻ Nyame kwan mu na iyi na ͻyɛ aheman a odzi mu. Ekyingye biara nnyi ho dɛ wiadze yi yɛ mber kumaabi na obiara so bͻsͻ owu ahwɛ. Mber bi ba a enuanom, anyɛnkofo na adͻfo nyinara hͻn ntamu tsetsew. Enyidze a ͻnnfa kwan mu nyinara bɛyɛ wen. Ahotͻ pa na enyigye mapa biara nnyi hͻ a okwetsir tseneneeyɛ. Sɛ obi ridzi tsenenee ekyir a ͻtse dɛ ͻronom bͻwen kuraba. “Nyankopͻn dze enyigye pa nyinara ama atseneneefo. Na obi a obosuro Nyankopͻn No, Obue kwan ma no, na ͻma no yiedzi fi bea a n’enyi nnda” (65:3-4). Dɛm ntsi yiedzi n’esumasɛm nye tseneneeyɛ. Dɛm ntsi sɛ yɛrehwehwɛ tseneneeyɛ a, mma yɛmmfa ntoto anan mu. Sɛ obi yɛ tseneneenyi a, dza obisa biara ne nsa kã. Nyankopͻn yɛ Mbͻbͻrhufo, Ɔdomfo, dɛm ntsi hwehwɛ tsenenee na Ɔdze biribiara bɛma wo (Malfuzat, Vol. V, pp. 106 – 107).
Ampaara dɛ sɛ obi yɛ tseneneenyi a, onya Nyame N’adom nyinara.Ɔwͻ dɛ obiara sese n’abrabͻ mu hwɛ dɛ oridzi suae a osuae dɛ ͻbɛma ne gyedzi ehia no akyɛn biribiara wͻ wiadze yi mu na ͻbɛfa tseneneeakwan do na wͻama ne kasa na ne ndzeyɛɛ nyinara ayɛ kor. Anohoba Messiah (ANN) no ka dɛ tsenenee no kwan yɛ dzen na obi a obotum afa do ara nye obi a obedzi Nyankopͻn Ne mbrasɛm nyinara do dɛ mbrɛ ͻtse na ͻyɛ dza Nyame pɛ na onndzi ͻnoara n’apɛdze do. Obiara ronntum nnya hwee mfi mpɛtu bra mu. Nyame N’adom na ohia. Gyedɛ obi bͻ mpaa na ͻbͻ noho mbͻdzen ansaana oeenya adom. Nyankopͻn Noara ahyɛ dɛ ͻwͻ dɛ yɛbͻ mpaa na yɛyɛ edwuma dzen Malfuzat, Vol. VI, p. 227).
Anhohoba Messiah (ANN) no ka dɛ, hom nhwehwɛ tseneneeyɛ osiandɛ Nyankopͻn N’adom na Ne nhyira dzi tseneneeyɛ ekyir na tseneneenyi nya bambͻ fi wiadze yi no mu atowerɛnkyɛm ho. Nyame N’adom ntsi yenya Nyame Ne nhyira pii dɛ yɛyɛ Okuw. Na yɛhu mbrɛ Nyankopͻn oyi hɛn fi atamfo hͻn tsirmupͻw ahorow mu. Hɛn kuw yi mu mba pii wͻ hͻ a wodzi tseneneeyɛ do na wͻhwehwɛ Nyankopͻn N’enyigye. Ɔwͻ dɛ yɛbͻ mbͻdzen dɛ yɛayɛ Bai’at ewie yi, yɛnya tsenenee suban a ͻno na ͻma Muslimnyi dzi yie. Iyi ara so na Anohoba Messiah (ANN) no rohwehwɛ efi hɛn nkyɛn. Hom mma yɛnkaakaa Nyankopͻn wͻ ber nyinara mu. Mpo Nyankopͻn Noara aka dɛ, Ɔronnhwer hwee sɛ yɛannkaakaa No a, mbom yɛbu hɛn enyi gu No do a, ͻko tsia hɛn ara. Hͻn a hͻn werɛ fir Nyankopͻn No ennya gyedzi a no mu yɛ dzen na hͻn werɛ fir dɛ da kor wͻbɛhyia No.
Dza osi nye dɛ hͻn abrabͻ pa na hͻn sunsum mu ahoͻdzen do tsew ber nyinara. Hͻn dze wͻdwen dɛ wiadze hia kyɛn ndakwamba. Dza ͻbͻto hͻn wͻ hͻn wu ekyir no, Nyankopͻn nkotsee na Onyim. Na hͻn a wͻdͻ wiadze yi no wonnya asomdwee wͻ hͻn abrabͻ yi mu na yehu nkorͻfo a sɛ wͻhwer agyapadze kumaabi mpo a wonntum nnyɛ hͻn ho hwee. Nyankopͻn aka dɛ, sɛ eka dɛ ewͻ gyedzi na ennya nyamesuro na enndzi Nyankopͻn Ne nhyehyɛɛ do a, nna wo gyedzi nnsi pi. Wͻ dɛm gyinabew yi mu no ammbͻ mbͻdzen dɛ renya nsakyer pa a, nna wo wiadze yi mu abrabͻ no atͻ kyew. Nnyɛ dɛ wͻbɛfrɛ dɛm nyimpa yi “Fasiq” (otuatsewnyi) nso ͻsan so yɛ obi a obu mbra do osiandɛ Fasiq so gyina hͻ ma nyia wͻabͻ anohoba dɛ obedzi Shariah (Islam mbra) do, na woebu mbra no bi do anaa ne nyinara mpo do.
Kuran ne kyɛfa bi ka kyerɛ hɛn dɛ obi a ͻyɛ bonyiayɛ ma Nyankopͻn N’adom no, woyi no fi setie ase na Fasiq na onya suban bͻn. Sɛ obi yɛ Bai’at na ͻbͻ anohoba dɛ ͻbɛma ne gyedzi ehia no akyɛn wiadze yi mu biribiara a, nna ͻwͻ dɛ ͻma n’enyi kͻ mbransɛm nyinara do na mma ommbu n’enyi nngu biara do wͻ kwan biara do. Ɔyɛ Nyame N’adom dɛ Ɔ’ama Ahmadiyyafo enya adom pii. Ɔyɛ Anohoba Messiah (ANN) no nhyira a onyaa a ͻdze rotoa Nkͻnhyɛnyi (NNN) n’edwuma no do na yɛrenya ho mfaso. Ampaara dɛ nkͻnhyɛ yɛ adom kɛse a Muslimfo binom regye ho kyim na wͻyɛ ho asͻr bͻ mpaa eso wͻsan pow. Hɛn tsir ayɛ yie dɛ yɛnya dɛm adom yi na yɛka hͻn a wonya no mu nhyira no bi. Yɛbenya ho mfaso yie wͻ ber a yɛbedzi nhyehyɛɛ a Anohoba Messiah (ANN) ayɛ ama hɛn no do. Ɔno yɛbɛyɛ dɛ hͻn a wͻadͻ esukͻ wͻ enyimbugudo mu na wͻatwetwe Nyankopͻn N’ebufuw hyew.
Anohoba Messiah (ANN) baa begyinaa no wura Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn Muhammad (NNN) n’anan mu dɛ ͻdze Nyankopͻn No Koryɛ robͻbͻ adze. Anohoba Messiah (ANN) akyerɛw dɛ; Nyankopͻn No koryɛ (Tawheed) nnyɛ dɛ obi bɛka Laa Ilaaha Illallah nkotsee wͻ ber a ͻwͻ abosom mpempem wͻ n’akoma mu. Ampaara dɛ obiara a ͻdze no ho to ͻnoara no do dɛ ͻnam ndaadaa kwan do, anaa ͻyɛ nhyehyɛɛ dɛ ͻyɛ Nyame anaa ͻdze no ho to obi no do dɛ mbrɛ nyimpa no yɛ Nyankopͻn no, Nyankopͻn dɛ nyimpa yi yɛ mbataho wͻ dɛm akwan ahorow nyinara mu. Abosom nnyɛ dza wͻdze sikamfutuw, dwetɛ anaa mbobaa ayɛ na wͻsom hͻn, mbom biribiara a sɛ ͻyɛ kasa anaa ndzeyɛɛ a wͻdze Nyankopͻn No gyinabew ma no no, yɛ bosom wͻ Nyankopͻn N’enyi do (Siraj-ud-Din ‘Isa’ike Char SawalonkaJawab, RuhaniKhaza’in, Vol. 12, pp. 349).
Nyankopͻn No koryɛ a ͻyɛ nokwar trodoo a Nyankopͻn ayɛ no akyɛdze na nkwagye gyina do nye dɛ bɛgye edzi dɛ Nyankopͻn nnyi ͻkahofo biara; dɛ ͻyɛ bosom anaa nyimpa anaa ewia anaa bosom (Moon) anaadɛ ͻyɛ nyimpa ne pɛ, anaa obi no nyansakrͻno anaa nkontomposɛm na bɛgye ato mu dɛ obiara nnyi hͻ a ͻwͻ tum kyɛn No anaa bɛfa obi dɛ ͻno na ͻkyɛ enyimnyam anaa ͻma enyimguase, anaa bɛfa obiara boafo na edze wo dͻ na wo som bɛma no, na bɛyɛ ahobrase na edze wo werɛ bɛhyɛ no mu na benya suro ama no. Nkabͻmu rennhyɛ mã gyedɛ dɛm ahyɛnsew ebiasa yi a ͻtoatoa do wͻ ha yi. Odzi kan, Honam Nkabͻmu wͻ hͻ, ͻkyerɛ dɛ, edwen wiadze nyinara ho dɛ onnyi hͻ a Ɔno mbom wͻ h, na ehu no dɛ ͻyɛ adze a owu na ͻyɛ biribi a onnyi mudzi. Ɔtͻ do ebien, Mbambayɛ Nkabͻmu, ͻkyerɛ dɛ dɛm “Rububiyya” na Nyametsir no hyɛ No Suban mu na dza aka a wͻba nyinara dɛ wͻyɛ awowaafo anaaso adͻyɛfo no ka nhyehyɛɛ a Ɔdze Ne nsa ayɛ kɛkɛ. Ɔtͻ do ebiasa, ͻdͻ, nokwardzi na etuhoakyɛ Nkabͻmu, ͻkyerɛ dɛ, nnkɛfa obiara abata Nyankopͻn ho wͻ ͻdͻ na som mu na edze wo werɛ hyɛ No nkotoo mu (Siraj-ud-Din ‘Isa’ike Char SawalonkaJawab, RuhaniKhaza’in, Vol. 12, pp. 349-350. Essence of Islam, Vol. I. pp. 169 – 170).
Anohoba Messiah (ANN) kasae faa Taqwa ne mudzi ho dɛ: Taqwa ne mudzi mapa yɛ iyi nkotsee dɛ nyimpa no honamdua begyina dɛ onnsɛ hwee na ampaara dɛ iyi yɛ Tawheed. Dɛ ebeyi Nyankopͻn esi hͻ dɛ ͻbor biribiara do yɛ Taqwa na iyi so Tawheed hyɛ mu. Kɛtseakyɛ Nyankopͻn ama yeenya dɛm gyinabew yi.
Hadhrat Khalifatul Masih dze too gua dɛ akwantu da n’enyim na ͻserɛɛ mpaabͻ ama ayɛ nhyira wͻ akwan nyinara mu.